Manni marichaa muudama koomiishinaraa fi itti aanaa koomiishianaraa ni raggaasisa – Fana Broadcasting Corporate
Manni marichaa muudama koomiishinaraa fi itti aanaa koomiishianaraa ni raggaasisa
Finfinnee, Caamsaa 7,2011(FBC)- Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa waltajjiisaa booritiin koomiishinaraa fi itti aanaa koomiishianaraa Koomiishinii Daangaa Bulchiinsaa fi Dhimma Eenyummaa ni raggaasisaan eegama.
Manni marichaa booru walga’ii idilee 39ffaa bara hojii 4ffaasaa ni gaggeessa.
Walga’ichaan koomiishinaraa fi itti aanaa Koomiishinii Daangaa Bulchiinsaa fi Dhimma Eenyummaa, akkasumas muudama koomiishinaraa fi itti aanaa koomiishinaraa Koomiishinii Araaraa fi Nageenyaa irrattis mari’atee ni raggaasisaan eegama.
Koreen dhaabbii dhimma qabeenya uumamaa, jallisii fi inarjii bulchiinsa gabaa albuudatiif wixinee labsii qophaa’e, qoratee ni raggaasisa.
Dabalataan wixineewwan labsii biroo qophaa’anirratti mari’atee koreewwan dhaabbii dhimmi isaan ilaallatuuf ni dabarsa.
Oromiyaan dhimmi barnoota afaan Oromoo mariif hin dhiyeessu -obbo Shimallis
Kwaataar Doolaara miiliyoona 18 Finfinneetti hoospitaala yaala kalee ijaarufi
MM Dr Abiy hoggansa haaraa Sudaanif ergaa baga gammaddanii dabarsan